Bit By Bit - agba nwere - 4.2 Gịnị bụ nwere?
Enweghị usoro na-achịkwa nwere anọ isi Efrata: mbanye nke sonyere, randomization nke ọgwụgwọ, nnyefe nke ọgwụgwọ, na-amata ọtụtụ esi.
Nlekọta ndị a na-achịkwa ahazi nwere isi ihe anọ dị iche iche: nchịkọta nke ndị na-eso ụzọ, nhazi ọgwụgwọ, inyefe ọgwụgwọ, na mmụba nke ihe ọ rụpụtara. Oge dijitalụ agbanweghị ụdị ihe a na-eme, ma ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe. Dịka ọmụmaatụ, na n'oge gara aga, ọ nwere ike ịbụ na ọ siri ike ịlele àgwà nke ọtụtụ nde mmadụ, mana nke a na-eme ugbu a n'ọtụtụ usoro ntanetị. Ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịchọta otú e si eji ohere ndị a eme ihe ga-enwe ike ịnwale ihe ndị na-agaghị ekwe omume na mbụ.
Iji mee ka nke a dịkwuo ntakịrị - ma ihe dịgidere na ihe gbanwere-ka anyị tụlee nyocha nke Michael Restivo na Arnout van de Rijt (2012) . Ha chọrọ ịghọta mmetụta nke ụgwọ ọrụ nke ndị ọgbọ na-ezighi ezi na nkwado akwụkwọ na Wikipedia. Karịsịa, ha mụtara mmetụta nke barnstars , onyinye nke ọ bụla Wikipedian nwere ike inye onye ọ bụla ọzọ Wikipedian ikwenye ịrụ ọrụ siri ike na ịrụsi ọrụ ike. Restivo na van de Rijt nyeziri ndị 100 Wikipedian ruru eru barnstars. Mgbe ahụ, ha na-enyocha ndị nnata 'onyinye ndị ọzọ na Wikipedia na ụbọchị 90 ndị ọzọ. N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị ha nyere ọdịda barnstars nọ na-eme obere ederede mgbe ha nwetasịrị otu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dị ka barnstars na-akụda mmụọ kama ịgba ume inye onyinye.
Ọ dabara na, Restivo na van de Rijt anaghị agba ọsọ "nhụsie ike ma hụ"; ha na-agba ọsọ a na-achịkwa nke ọma. Ya mere, na mgbakwunye na ịhọpụta 100 ndị na-enye aka n'ịchọta barnstar, ha na-ahọrọ 100 ndị inyeaka kachasị elu na ha enyeghị otu. Ndị a 100 jere ozi dị ka otu njikwa. Na, nkatọ, onye nọ na ndị na-agwọ ọrịa na onye nọ na-achịkwa kpebiri na o nweghị usoro.
Mgbe Restivo na van de Rijt lere omume nke ndị nọ na-achịkwa, ha chọpụtara na onyinye ha na-ebelata. Ọzọkwa, mgbe Restivo na van de Rijt jiri ndị mmadụ nọ na-agwọ ọrịa (ntụgharị, barnstars) nye ndị nọ n'ìgwè ahụ, ha chọpụtara na ndị nọ n'ìgwè ọgwụ ahụ nyere ihe dị ka pasent 60 ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onyinye nke ìgwè abụọ ahụ na-eduhie, ma ndị otu na-achịkwa na-eme ngwa ngwa.
Dị ka nchọpụta a na-egosi, ìgwè ndị nchịkwa na-eme nnyocha dị oké egwu n'ụzọ nke dịtụtụdị na-adabaghị adaba. Na iji chọpụta mmetụta nke barnstars, Restivo na van de Rijt chọrọ iji hụ ndị na-anataghị barnstars. Ọtụtụ mgbe, ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-amaghị ihe ndị ha na-eme enweghị ekele maka uru dị ukwuu nke ìgwè ahụ na-achịkwa. Ọ bụrụ na Restivo na van de Rijt enweghị otu njikwa, ha ga-adọta kpọmkwem nkwubi okwu na-ezighi ezi. Njikwa dị iche iche dị oke mkpa na CEO nke nnukwu ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa kwuru na e nwere ụzọ atọ a pụrụ isi chụpụ ndị ọrụ n'aka ụlọ ọrụ ya: maka izu ohi, maka iyi egwu mmekọahụ, ma ọ bụ maka ịgba ọsọ na-enweghị otu njikwa (Schrage 2011) .
Nnyocha Restivo na nke Van de Rijt na-egosi isi ihe anọ nke nnwale: nchịkọta, randomization, aka, na ihe ọ rụpụtara. Otu a, ihe anọ ndị a na-eme ka ndị ọkà mmụta sayensị gbanwee mmekọrịta ha ma chọpụta mmetụta mmetụta nke ọgwụgwọ. N'ụzọ doro anya, randomization pụtara na ndị mmadụ na usoro ọgwụgwọ na iche iche ga-adị. Nke a dị mkpa n'ihi na ọ pụtara na ihe ọ bụla dị iche na ihe dị n'etiti otu abụọ ahụ nwere ike ịsị na ọ bụ ọgwụgwọ ahụ, ọ bụghị onye na-akwado ya.
Na mgbakwunye na ịbụ ihe atụ mara mma nke usoro nyocha, nchọpụta Restivo na van de Rijt na-egosikwa na nchịkọta nke nchọpụta dijitalụ nwere ike ịdị iche na nke nyocha nke analog. Na nyocha Restivo na nke Van de Rijt, ọ dị mfe inye onye ọ bụla barnstar, ọ dịkwa mfe ịgbaso nsonaazụ-ọnụ ọgụgụ nke ndozi-oge ogologo oge (n'ihi na idebe akụkọ ihe mere eme na-edepụta ya na Wikipedia). Ikike a nke ịgwọta ọgwụgwọ na nhapụta ihe na-efughi ihe ọ bụ n'amaghị adaba ka ihe ndị dị n'oge gara aga. Ọ bụ ezie na nnwale a metụtara mmadụ 200, ọ gaara enwere puku 2,000 ma ọ bụ ọbụna mmadụ 20,000. Isi ihe na-egbochi ndị nchọpụta ahụ na-eme ka nnyocha ha ghara ịdị irè site na otu narị ihe na-adịghị eri; ọ bụ ụkpụrụ ọma. Nke a bụ, Restivo na van de Rijt achọghị inye ndị na-edeghị akwụkwọ barnstars, ha achọghị ka nnwale ha mebie obodo Wikipedia (Restivo and Rijt 2012, 2014) . M ga-alaghachi na ụfọdụ n'ime ụkpụrụ omume ndị dị elu site na nyocha ndị e mesịrị na isi nke a na isi 6.
N'ikpeazụ, nnwale nke Restivo na van de Rijt na-egosi n'ụzọ doro anya na ọ bụ ezie na mgbagha bụ isi nke nnwale ahụ agbanwebeghị, nchịkọta nke nyocha nke dijitalụ pụrụ ịdị nnọọ iche. Ọzọ, iji dokwuo anya nkewa na ohere ndị mgbanwe ndị a mepụtara, m ga-eji nyocha ndị ahụ na-eme nchọpụta nwere ike ime ugbu a na ụdị nnyocha ndị e mere n'oge gara aga.